1. Momba ny mofomamy Miaraka amin'ny fetin'ny fahasambarana Tena ilaina Satria ny fofon'ny mofomamy dia mameno ny trano ary mamorona fifandraisana mafana mandritra ny vanim-potoana ho avy. Fa ny akora ao anaty mofomamy izay mahatonga azy ireo ho tsara fihinana sy manampy zava-baovao dia dibera tsy azo ihodivirana. Raha tokony hividy izany amin'ny fivarotana lehibe na mpivaro-mofo Mety tsy hijery manokana sy hahazo tsiro tsy manam-paharoa Androany dia holazainay aminao ny fomba fanaovana dibera mora handravahana ny mofomamy hiteraka tsiky sy fahasambarana. Inona no atao hoe dibera?
2. Andao fantarina hoe inona ny dibera voalohany. Ireo no fangaro izay matetika ampiasaina amin'ny fanaova mofo, mofomamy sns. Fantatra koa amin'ny rambon'ny dibera Ny ambiny avy amin'ny fanaovana crème de butter. Ity dia antsoina hoe churning, ary ny sisa amin'ny rano dia dibera. Ny endriny sy ny endriny dia mitovy amin'ny ronono mihintsy. Na ronono marikivy Ny faritra sasany toa an'i Eropa Ampiasaina be amin'ny fandrahoana sakafo Ary misy olona sasany te hisotro azy io satria misy tombony mitovy amin'ny ronono, nefa tsy misy tavy. Fitaovana dibera • Mampiasà ronono iray vera, ronono tsotra (tsy matavy) (2% tavy) • asidra voajanahary toy ny ranom-boasarimakirana na vinaingitra fotsy iray. LOHA
3. Fomba fanamboarana dibera an-trano Araraka ranom-boasarimakirana 1 na vinaigrette 1 sotro isaky ny ronono 1 kaopy, tsara kokoa ny ronono matavy na 2%, fa ny ronono vita amin'ny menaka tsy mety. Satria mampiasa tavy hiteraka fanehoan-kevitra isika
4. Afangaro miaraka ireo fangaro ary avelao mandritra ny 5 - 10 minitra, avy eo afangaro haingana amin'ny sotro fandrefesana. Mandra-pahatongan'ny ronono mifangaro ao anaty vongan-tany kely. Mandra-pahatongan'ny manomboka matevina Azo ampiasaina Fomba fanamboarana dibera an-trano. Mety hanome valiny izay tsy dia mafy toa an'ireo novidina tamin'ny fivarotana lehibe. Fa minoa ny fahadiovana Ary tsiro voajanahary tsy misy fangarony mifangaro fitandremana mba hamoronana singa sakafo tsindrin-tsakafo tsara indrindra ao amin'ny fianakaviana.
5. Menu namboarina tamin'ny dibera namboarina Misy menus maro izay mampiasa dibera an-trano. Araraka ny pancakes, haingo miaraka amin'ny voankazo sy tantely. Avy eo ianao dia hahazo resipeo pancake manokana izay sady mamy no manitra miaraka amin'ny tsiro marikivy sy matavy kely izay azo hanina miaraka amin'ny fianakaviana manontolo.
6. Na afangaro amin'ny ovy nopotsehina dia afangaroy ho nofo iray. Aroso amin'ny taolan-tehezana voatono Ho matsiro be tokoa. Handravaka mofo mofomamy tsara tarehy mandritra ny fetin'ny Taom-baovao. Tena hampiavaka ny refin'ny tsiro Ny tena zava-dehibe dia azo atao amin'ny fianakavianao sy ny zanakao koa izy io. Avelao ny dibera vita an-trano hanatsara ny tsiron'ny sakafonao. Ataovy ny anao, chic